Wasiirka A. Gudaha oo lagu qaaday Amarkii Golaha Wasiirada & Hubkiisii oo lala wareegay – Kismaayo24 News Agency
Wasiirka A. Gudaha oo lagu qaaday Amarkii Golaha Wasiirada & Hubkiisii oo lala wareegay
Breaking News Kaydka Wararka Xulka ah Somali News
by nairobi 9th July 2017 9th July 2017 083
Xog cusub ayaa sheegaysa in wasiirka arimaha gudaha Dowlada Federaalka Somalia Cabdi Farax Siciid Juxa muddo labo Cisho ah uusan shaqo tagin kadib markii ciidamadii ilaalada u ahaa ay wasarada gashaandhiga Somalia kala noqotey.
Xogtan ayaa sheegaysa in wasiirka arrimaha gudaha ay saameyn ku yeelatey siyaasad dowlada Federaalka Somalia soo rogtey, taasoo amreysay in dhamaan ciidamada ka tirsan xooga dalka Somalia ee ku maqan shaqooyinka leexsan dib ugu noqdaan taliskey ka tirsanaayeen.
Lama oga sababta Wasiirka arimaha gudaha Somalia oo madax u ah mid kamid ah hay’adaha dowlada ugu muhiimsan ay saameynta ugu yeelatey arrintaan, balse Wararka ayaa sheegaya in Mudane Cabdi Farax Juxa iyo madaxda kale ee ciidamada isku fahmi waayeen howshaan sida ay u dhacdey.
Wararka ayaa intaas ku daraya in in Wasiirka arrimaha gudaha ka xumaadey qaabka madaxda amniga ula dhaqmeen, isagoo dhinaca kale ka biyo diidey in la siiyo ciidamo kale balse dalbadey in loo daayo kuwa uu ku kalsoon yahay.
Xogtaan ayaa sheegeysa in Wasiir Cabdi Farax Siciid oo awal ka cabanayey gadiid la’aan ay iminka soo foodaaartey Ilaalo la’aan, sidaa darteed uu go’aansadey in gurigiisa ku sugnaado inta xal laga gaarayo arintaan.
Wasiirkii hore ee wasaarada arrimaha gudaha Somalia ayaa ka gaabsadey Inuu dib u soo celiyo gaariga dowlada horey u siiyey kasoo ahaa nooca xabbadu karin.
Dowlada Federalka Somalia ayaa dhowaan qaadey talaabooyin xagga amniga ah iyadoo dhowaan wasaarada amniga qoraal ay soo saartey ka dalbatey shirkadaha gaarka loo leeyahay iney diwaan galiyaan ilaaladooda gaarka ah.
Barnaamijkii Xasilinta Caasimada oo habac iyo Ciidamadi loo xil saaray oo hoose isii dhacaaya.
Daawo: Hooyo 5 Caruura korsato oo kayaabisay Madaxad iyo saraakiisha Dowlada kadib markii lacag ugu horaysay ugu deeqday Ciidanka Soomaaliyeed.
TOP NEWS: Maxaadan Ogeyn oo laga soo sheegaya Guud ahaan Gobolka Bakool????
Tifaftiraha K24 30th July 2016
Mac,hadka IRPAT-ayaa dood kulul dexdhigay qaar kamid ah musharixiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka dalka ,Cadaado
Daawo Muuqaal: Madaxtooyada soomalia oo muuqaal ka soo saartay socdaalka farmaajo ee turkiga iyo yuusuf garaad oo….